AppGratis, fampiharana fampiroboroboana fampiharana isan'andro, mijanona tsy mandeha. | Vaovao IPhone
AppGratis, fampiharana fampiroboroboana fampiharana isan'andro, mijanona tsy mandeha.
Pablo Aparicio | | Fampiharana iPhone
Rehefa nividy ny iPhone voalohany aho dia nantsoina hoe AppGratis ny iray amin'ireo fangatahana natolotra ahy. Simon, ilay endrika hita maso amin'ny serivisy, dia niandraikitra ny fifampiraharahana tamin'ny mpandraharaha mba hanolotra fangatahana karama isan'andro nefa tsy mila mandoa na inona na inona ho azy ireo. Androany, afaka fito taona, AppGratis dia hamarana dia izay namela fametrahana 50 tapitrisa manerantany, maimaimpoana daholo izy ireo na amin'ny vidiny mihena be.
Ny olana amin'ity fampiharana ny French Simon Dawlat ity dia nanomboka tamin'ny 2013, rehefa Nesorin'i Apple tao amin'ny App Store ny fampiharana satria, araka ny filazan'i Cupertino, dia manitsakitsaka ny fitsipiky ny fivarotana fampiharana azy milaza ny fampiroboroboana sy ny marketing izay avy amina fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo. Ny serivisy dia nitohy niasa ho an'ireo mpampiasa izay tsy namono ny rindranasa, ho an'ireo izay nanampy ny mailak'izy ireo tao amin'ny tranonkalan'ny serivisy sy tao amin'ny kinova Android.
Mikatona ny AppGratis aorian'ny fanompoana nandritra ny 7 taona
Araka ny azontsika vakina amin'ny fanambarana iray namoaka ao amin'ny bilaogin'ny tranokala ofisialiny, ny ekipan'ny AppGratis dia milaza izany nilavo lefona ny fisian'ny fanombohana, rehefa hitan'izy ireo fa sarotra tanterahina ny fanombohana ary mizaka ny ampahany lehibe amin'ny fiainan'ny olona iray izy ireo, tsy misy antoka fa hahomby izany.
Velona i AppGratis ary maty. Izy io dia vokatra tsara miaraka amin'ny tombony lehibe azo amin'ny maha-voalohany azy amin'ny fotoana vaovao. Nisy ny olona tia azy, ny sasany tsy tia, nefa tsy maninona izany. Tafiditra an-tsehatra izao tontolo izao ary isika koa. Nisy ny fisondrotana sy ny fivoarana, ny fientanam-po, ny fahafinaretana ary tena tsara vintana - mandra-pijanonay tsy ho tsara vintana fa tsy nijanona.
Na dia mieritreritra aza aho fa tsy vaovao tsara ny fanidiana ny AppGratis, mino koa aho fa tsy zava-doza koa izany. Ao amin'ny App Store dia misy rindranasa am-polony izay mampahafantatra anao momba ny fampiroboroboana, fa tsy iray isan'andro fotsiny. Na izany na tsy izany, misaotra sy veloma, AppGratis.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » AppGratis, fampiharana fampiroboroboana fampiharana isan'andro, mijanona tsy mandeha.
3 hevitra, avelao ny anao
Alexander dia hoy izy:
Eny, mahamenatra. Izaho dia nametraka azy hatramin'ny nivoahany tamim-pahombiazana ary nahazo rindrambaiko vitsivitsy aho noho io.
Misy iray hafa hitako fa tena tsara, AppZapp, feno tokoa izy io ary manana fanairana manokana ho an'ireo fampiharana sy mpamorona. Tena feno. Manoro anao izany aho.
Valiny tamin'i Alejandro
manameloka42 dia hoy izy:
Ny iray hafa tsara dia ny AppShopper, rehefa misoratra anarana ianao maimaim-poana, azonao atao ny mampiasa ny pejin-tranonkala hifanakalo mba hametrahana ilay fampiharana tadiavina, ireo izay anananao sns na ilay app. Mampahafantatra anao ireo tadiavinao sy ireo anananao izy io, raha misy fiovana amin'ny vidiny ary raha misy fanavaozana. Isan'andro izy ireo dia mametraka programa tsy andoavam-bola, amidy na vaovao
Valiny ho an'ny mpitsikera42
Andres dia hoy izy:
Misaotra an'io fampiharana io, nahazo pro basikety runtastic aho, maimaim-poana, misaotra ny zavatra rehetra Simón
Valiny tamin'i Andres
Ny Smart Keyboard manaraka dia afaka manampy fanalahidy vaovao: "emoji", "Siri" ary "hizara"
Pokémon GO dia manitatra: pokémon vaovao sy fisehoana hita eo imasony